मंगलबार अमेरिकी डलरको उकालो यात्रा सुरु, कस्तो छ अन्यदेशको हेर्नुहोस् (सूचिसहित) – Chautari Online
September 8, 2020 449
काठमाडौं । मंगलबार अमेरिकी डलर उकालो लागेको छ। ३ दिनसम्म ११६ रुपैयाँ ७२ पैसामा कारोबार भएको अमेरिकी डलर मंगलबार उकालो लागेर ११७ रुपैयाँ ०५ पैसामा कारोबार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
Prevमल किन्न सहकारीमै ओच्छ्यान ! महंगोमा बेच्नेलाई कारवाही भएन कृषि ज्ञान केन्द्र र सहकारीवीच आरोप–प्रत्यारोप
Nextमधुमेह छ ? यस्ता तरकारी आजैबाट खान थाल्नुहोस्